नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुल्दै - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं– सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने तयारी गरेको छ। एक हजार २ सय अश्वक्षमताको र त्योभन्दा बढीका ट्याक्सीको दर्ता गर्न अध्ययन भइरहेको छ।
यात्रुलाई सुविधायुक्त सवारीसाधन आवश्यक भएको भन्दै नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुलाउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए।
याे पनि पढ्नुस ट्याक्सीमा कन्डम अनिवार्य !
अहिले सडकमा रहेका ट्याक्सी पुराना रहेकाले तिनलाई हटाउँदै नयाँ र सुविधायुक्त ट्याक्सी ल्याउनुपर्ने उनले बताए। विभागका अनुसार सडकमा कस्ता र कति क्षमताका ट्याक्सी आवश्यक छ भनी अध्ययन भइरहेको छ।
ट्याक्सीको दर्ता नियमितरूपमा खुलाउनेभन्दा पनि केही समयका लागि खुलाइने उनको भनाइ छ। ‘अहिले केही समयका लागि र सीमित सङ्ख्यामा खुलाइने भए पनि त्यसपछि फेरि बन्द हुन्छ’ उनले भने।
याे पनि पढ्नुस ट्याक्सीमा छुटेको साढे २ लाख रकम फिर्ता
सरकारले लामो समयदेखि ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरेकामा भूकम्पीडितलाई राहत दिने भन्दै विसं २०७२ भूकम्पीडित जिल्लावासीका लागि ट्याक्सीको दर्ता खुलाएको थियो।
अहिले सडकमा रहेका ट्याक्सीमध्ये अधिकांश ८०० अश्वक्षमता बराबरका छन्। सिट पनि साँघुरो र कम क्षमताको हुँदा यात्रुलाई असहज रहेको छ।
याे पनि पढ्नुस प्लेनभन्दा ट्याक्सी चढ्नु महँगो !
ट्याग्स: ट्याक्सी, ट्याक्सी दर्ता